डाउनलोड गर्नुहोस् KMSpico को लागी Windows
सित्तैमा डाउनलोड गर्नुहोस् को लागी Windows (3.20 MB)
डाउनलोड गर्नुहोस् KMSpico,
KMSpico डाउनलोड गर्नुहोस्, नि: शुल्क सुरक्षित विन्डोज एक्टिभेसन, अफिस एक्टिभेसन प्रोग्राम।
किन तपाइँ KMSpico डाउनलोड गर्नु पर्छ?
यसले विन्डोज अपरेटिंग सिस्टम र अफिस प्रोग्रामको अनिश्चित, असीमित, आजीवन सक्रियता प्रदान गर्दछ। म भन्न सक्छु कि माइक्रोसफ्ट विन्डोज अपरेटिंग सिस्टम र माईक्रोसफ्ट अफिस प्रोग्राम सक्रिय र लाइसेन्स दिन सब भन्दा सजिलो र सब भन्दा चाँडो तरीका हो। म यसलाई भाइरस रहित विन्डोज / अफिस एक्टिभेसन प्रोग्रामको लागि खोज्ने सबैलाई सिफारिस गर्दछु
KMSpico के हो?
विन्डोज अपरेटिंग सिस्टम (१०, .1 .१,,, system, भिस्टा) र माईक्रोसफ्ट अफिस प्रोग्राम (२०१,,5365, २०१ 2013, २०१०) को सक्रियता, इजाजतपत्र, नि: शुल्क सक्रियताको लागि सुरक्षित उपकरण।
केएमएसपिकोको साथ विन्डोज / अफिस एक्टिभेसन कसरी सक्रिय गर्ने?
सक्रियता र इजाजतपत्र उपकरणहरू जुन म माइक्रोसफ्टको अपरेटिंग सिस्टम विन्डोज र अफिस प्रोग्राम अफिस प्रयोग गर्नेहरूको लागि सिफारिस गर्दछु सूचीको शीर्षमा छ। KMSpico, एक निःशुल्क, सफा र कानूनी विन्डोज एक्टिवेशन प्रोग्राम, -२-बिट र-64-बिट प्रणाली समर्थन गर्दछ। KMS सक्रियताको विपरीत, यसले काउन्टरलाई दिनको दुई पटक रिसेट गरेर १ 180०-दिन सीमालाई हटाउँछ। यसले तपाईंलाई जीवनको लागि विन्डोज र अफिस सक्रिय गर्न अनुमति दिन्छ। यो प्रयोग गर्न पनि धेरै सरल छ। विन्डोज र अफिस सक्रिय गर्नका लागि तपाईले गर्नु पर्ने भनेको; KMSpico खोल्दै र रातो बटन क्लिक गर्दै। तपाईंले सेकेन्डमा नै Windows र Office सफ्टवेयरको इजाजतपत्र प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
फाईल RAR पासवर्ड: getkmspico.com
विन्डोज संस्करणहरू तपाइँ KMSpico को साथ सक्रिय गर्न सक्नुहुनेछ:
विन्डोज भिस्टा व्यापार / एन
विन्डोज भिस्टा इन्टरप्राइज / एन
विन्डोज Professional प्रोफेशनल / एन
विन्डोज Enterprise इन्टरप्राइज / एन
विन्डोज 8.१ (सबै)
विन्डोज १० (सबै)
कार्यालय संस्करणहरू तपाइँ KMSpico को साथ सक्रिय गर्न सक्नुहुनेछ:
कार्यालय २०१० (सबै)
कार्यालय २०१ 2013 (सबै)
Office5365 (सबै)
कार्यालय २०१ ((सबै)
विन्डोज सर्भर संस्करणहरू तपाइँ KMSpico को साथ सक्रिय गर्न सक्नुहुनेछ:
सर्भर २०० Standard मानक / डाटासेंटर / उद्यम
सर्भर २०० ((R2) मानक / डाटासेंटर / उद्यम
सर्भर २०१२ मानक / डाटासेंटर / उद्यम
सर्भर २०१२ (R2) मानक / डाटासेंटर
विन्डोज एक्टिभेसन (एक्टिभेसन) प्रोग्राम डाउनलोड
विन्डोज एक्टिवेशन (एक्टिभेसन)
विन्डोज activ एक्टिवेशन (एक्टिभेसन)
विन्डोज .1.१ सक्रियता (सक्रियकरण)
विन्डोज १० एक्टिभेसन (एक्टिभेसन)
विन्डोज भिस्टा एक्टिभेसन (एक्टिभेसन)
विन्डोज १० अफिस5365 सक्रियता
विन्डोज १० एक्टिभेसन भाइरस मुक्त
विन्डोज एक्टिभेसन प्रोग्राम
विन्डोज activ एक्टिभेसन प्रोग्राम
विन्डोज .1.१ सक्रियता कार्यक्रम
विन्डोज १० एक्टिभेसन प्रोग्राम
विन्डोज भिस्टा एक्टिभेसन प्रोग्राम
विन्डोज इजाजतपत्र नवीकरण
विन्डोज लाइसेन्स प्रोग्राम
माईक्रोसफ्ट अफिस सक्रियता (सक्रियता)
Office5365 सक्रियता (सक्रियकरण)
कार्यालय २०१ English टर्की सक्रियता (सक्रियता)
Office5365 सक्रियता कार्यक्रम
Office KMS सक्रियता उपकरण
फाईल आकार: 3.20 MB
डाउनलोड गर्नुहोस्: 17,021